🥇 ▷ Sida loo soo celiyo lambarka sirta ah ee Windows ✅
Sida loo soo celiyo lambarka sirta ah ee Windows
Maaddaama isticmaaleyaasha Windows 8 iyo 10 ay badanaa u isticmaalaan koontooyinkooda Microsoft inay gasho akoonkooda Windows, dib-u-dejinta lambarkaaga akoonkaaga Microsoft ayaa kaa caawin doona inaad soo ceshato gelitaanka kumbuyuutarkaaga xiran.
Habka 1: dib u dhig lambarkaaga akoonkaaga Microsoft akoonka
Qaacidani uma baahna diskiga dib loo bilaabo.
Waxaad u baahan doontaa oo keliya cinwaanka emaylkaaga, lambarka taleefankaaga ama magacaaga Skype.
Kuwani waa tillaabooyinka ay tahay inaad raacdo:
Tag Bogga soo-celinta akoonka Microsoft
Gali cinwaanka emaylkaaga, magaca Skype ama lambarka taleefanka ee la xiriira akoonka Microsoft
Dooro haddii aad rabto inaad ku hesho lambarkaaga soo kabashada e-mayl ama fariin qoraal ah
Bixi macluumaadka loo baahan yahay si loo xaqiijiyo aqoonsigaaga. Waxaad ka heli doontaa lambarka soo kabashada iyadoo loo marayo habka aad dooratay
Gali lambarka soo kabashada gudaha Xaqiiji aqoonsigaaga oo guji Soo socda
Haddaba geli lambarkaaga sirta ah laba jeer.
Habka 2: u isticmaal koontada kale maamulaha kumbuyuutarkaaga si aad u furatid eraygaaga sirta ah
Tani waa hab kale oo fudud oo caawin kara haddii kombuyuutarkaagu leeyahay inka badan hal akoon adeegsade.
Waa inaad isticmaashaa koontada kale ee maareeyahaaga kumbuyuutarkaaga si aad u degto lambarkaaga sirta ah. Haddii aadan haysan rukhsad, waxaad weydiisan kartaa maamulaha inuu kaa caawiyo dib u dejinta eraygaaga sirta ah.
Gal cinwaanka kale ee maamulaha ee la galka saxda ah
Tag tagga xakamaynta
Guji Koontada isticmaale
Xullo Maaree koonto kale. Xulashadaani sidoo kale waxay noqon kartaa Beddel koonto qoraallada kale ee Windows.
Xulo koontada aad jeceshahay inaad degto
Guji ikhtiyaarka Badalida Lambarka sirta ah ama Abuur eray sir ah
Gali password cusub laba jeer. Waxaad sidoo kale isku hagaajin kartaa a lambarka sirta ahsi lagaaga caawiyo inaad xasuusato eraygaaga sirta ah.
Guji Badalida Lambarka sirta ah , oo diyaar ah!
Hadaan mid ka mid ah hababkaani shaqeynin, waxaad adeegsan kartaa aalad furaha soo kabashada ee Windows.
Habka 3: isticmaal furaha sirta ee Windows
Waxaad u adeegsan kartaa aalad soo kabashada furaha ah ee Windows si aad uga soo ceshato eraygaaga sirta ah ama lumay. Waxaa jira qalab badan oo wax ku ool ah oo aad kala soo bixi karto degello websaydh ah.
Kuwani waa qaar ka mid ah aaladaha sirta ah ee soo kabashada ee Windows iyo sida loo isticmaalo:
1. Windows password password
Kani waa aalad soo kabashada ugu wanaagsan. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad dib u dejiso maamulahaaga ama lambarka sirta ah ee Windows adigoon dib u soo dhigin nidaamkaaga hawlgalka.
Tan ugu muhiimsan, uma baahnid inaad khabiir ku tahay tikniyoolajiyadda si aad u isticmaasho aaladdan.
Tilmaamaha caadiga ah ee password password Windows
Dib u dejinta furaha sirta ah ama halmaamay
Heerka Soo-kabashada ee Windows password wuxuu la shaqeeyaa USB flash drive si uu kaaga caawiyo dib-u-dejinta eraygaaga luma ama hilmaamay.
Haddii aad rabto inaad soo ceshato maamulahaaga ama lambarka sirta ah, barnaamijkan ayaa kaa caawin doona inaad ku guuleysato.
Ka gudub furayaasha sirta ah ee Windows
Heerka Furaha Furaha Windows Windows ayaa waliba kaa caawin kara inaad ka booddo erayga sirta ah. Haddii aad u muuqato inaad ilowday eraygaaga sirta ah ee Windows Oo waa inaad xiraysaa kombiyuutarkaaga ka hor intaadan bixin, waad isticmaali kartaa aaladdan.
Waxaa leh, waxaad ku kala saari kartaa lambarka sirta ah ee hab amaan ah ama disk disk ah.
Dib u dejinta lambarka sirta ah ee Windows
Wuxuu kaloo isticmaali karaa Windows Password Key Standard si uu dib ugu dejiyo maamulahaaga ama erayga sirta ah.
Qalabkan is-le’eg wuxuu ku habboon yahay qof kasta oo aan xasuusan karin lambarkooda sirta ah laakiin doonaya inuu dib u dejiyo.
Haddii aadan dooneynin inaad furatid furahaaga eraygaaga Windows-ka oo aadan xasuusan karin, Windows Password Recovery Standard ayaa ah aaladda kugu habboon adiga.
Soo celinta sirta ah ee Windows Qalabkaan, sidoo kale waa mid dhakhso badan, taasoo ka dhigaysa habka ugufiican kuwa raadinaya inay ka soo kabsadaan galaangal u yeelashada kumbuyuutarradooda.
Sida loo isticmaalo nidaamka furaha sirta ee Windows
Halbeega furaha furaha ah ee “Windows password Key” wuxuu kuu oggolaanayaa inaad abuurto USB bootable ama CD / DVD.
Sidan ayaad u sameyn kartaa:
Marka hore, waa inaad soo degsataa nooca tijaabada ah ee softiweerka
Adeegso softiweerka si aad u abuurto dib u dejin ISO
Sahaminta dariiqa loo maro ISO ee lagu abuuray tallaabada ugu horeysa ee kor ku xusan si aad u doorato feylkaaga furaha lambarkaaga furaha ah ee Windows ka jira
Xullo kombiyuutarka aad ku bilowdo diskigaaga
Guji badhanka Diiwaan geli oo sug
Kadib, ka bilow kombiyuutarkaaga CD-ga bootable CD / DVD ama USB aad adigu abuuray.
Mid ka mid ah faa iidooyinka ugu weyn ee isticmaalka Windows Password Key waa in ay fududahay in la isticmaalo.
Waad u isticmaali kartaa inaad ka soo ceshato, dib u dajiso ama aad iskaga dhaafto lambarkaaga sirta ah Windows. Waxay sidoo kale leedahay boqolkiiba 100% soo kabashada.
2. Soo kabashada sirta ah ee Windows Passue
Aaladdaan soo kabashada furaha ah ayaa furi kartaa lambarka sirta ah ee adeegsadaha iyo maamulaha Windows iyadoon wax khasaare ah loo geysan xogaha. Waxa ka shaqeeya Windows 10, 8, 7, XP, Vista iyo Windows Server
Raac talaabooyinkan fudud si aad u soo ceshato eraygaaga sirta ah aaladdaan:
Soo dejiso Passue Windows Password Recovery kombuyutarkaaga
Ku rakib barnaamijka kombuyuutarka shaqeeya
Adigoo isticmaalaya kumbuyuutarka socda, samee khariidada lambarka sirta ah
Gali diskiga boot-ka ee kombiyuutarka iyadoo ay la socdaan dhibaatooyin isla markaana u habeyn inuu ka soo dhex baxo
Waxaad ku arki doontaa dhammaan akoonnada adeegsadaha kombuyutarkaaga. Xulo kuwa xannibay
Guji badhanka Soo celinta lambarka sirta ah , ku xiga Dib u Bilow Si aad kombiyuutarkaaga dib ugu bilowdo.
Hadda waad geli kartaa kombuyutarkaaga bilaa furaha sirta ah.
3. Reset Windows password Reset
Tani waa aalad kale oo sifiican looga soo kabsado Windows-ka.
Kuwani waa tillaabooyinka ay tahay inaad raacdo si aad u adeegsato qalabkan:
Soo dejiso Dib u dejiyaha Windows password Sirta ah kumbuyuutar shaqeynaya
Gali PC-gaaga CD / DVD ama USB flash drive
Xulo nooca warbaahinta aad rabto inaad u adeegsato badhanka kala duwan ee aad ku arki karto halkaas.
Guji Bilow duubista in la abuuro diskiga sirta ah ee Windows
Isku habeyn kombiyuutarka dhibaatada leh inuu kabo CD / DVD ama USB
Ka soo qaado kombiyuutarka diskiga boot-ka
Markuu kombiyuutarka sirta ah dib u bilaabmo, xulo isticmaale oo guji Soo celinta si dib loogu dhigo lambarka sirta ah ee adeegsadahaas gaarka ah
Guji badhanka Dib u Bilow Si aad u bilowdo kombiyuutarkaaga.
Waxaad hadda ku gali kartaa lambarkaaga sirta ah.
4. Qalabka furaha sirta ee Ophcrack ee Windows
Ophcrack Waa mid ka mid ah aaladaha furaha sirta ah ee bilaashka ah ee laga helo Windows Maxaad ka heli kartaa Maaha oo kaliya dhakhso, laakiin sidoo kale fududahay in loo isticmaalo bilowgayaasha.
Maadaama aadan heli karin kombuyuutarka dhibaatada leh, waa inaad isticmaashaa kumbuyuutar ka shaqeeya inuu galo bogga internetka ee Ophcrack oo aad kala soo baxdo muuqaalka ISO ee bilaashka ah.
Ku gub faylka CD / DVD ama USB drive kuna xir kombuyutarka dhibaatooyinka leh disk-ga.
Barnaamijka Ophcrack wuxuu heli doonaa maamulaha iyo astaamaha isticmaaleyaasha Windows wuxuuna si toos ah u soo ceshan doonaa eraygaaga sirta ah.
Qalabka wuxuu ka soo ceshan karaa erayga furaha ee Windows oo leh xarfo isku dhafan iyo nambarro wax ka yar 4 daqiiqo. Waxay la jaan qaadi kartaa Windows 8, 7, Vista iyo XP.
5. Khadka tooska ah ee NT password & Diiwaan Geliyaha (ONTP & RE) (aaladda soo kabashada ee Windows-ka)
Qalabkan Waxay u shaqeysaa si ka duwan aaladaha kale ee furaha sirta ah, maadaama ay tirtireyso eraygaaga sirta ah halkii aad ka dejin lahayd.
Sida Ophcrack, waa inaad gubtaa faylka loo yaqaan ‘ISO Offline NT password & Registry Editor faylka’ CD / DVD ama USB oo aad ka bilowdo kumbuyuutarka dhibaatada kujira diskka boot-ka.
Sug xoogaa daqiiqado ah qalabka si aad u tirtirto furaha sirta ah. Hadda waxaad ku geli kartaa kombuyutarkaaga Windows oo markaa sameeysaa furaha eraygaaga cusub.
Nidaamka soo kabashada waxaa ku jira shaqooyinka khadka taliska qaarkood, laakiin waa inaysan ku adkaanin celceliska adeegsada kombuyuutarka.
Haddii aad aamminsan tahay in istiraatiijiyaddan “tirtirka furaha” ay tahay waxaad u baahan tahay, markaa waa inaad xaqiiqdii isku daydaa barnaamijkan.
Tafsiirka khadka tooska ah ee NT Password & Diiwaan Gelinta waxay ku shaqeysaa 64-bit iyo 32-bit noocyo kombiyuutarro wata Windows XP, Windows View, Windows 7, Windows 8 iyo Windows 10.
Sidoo kale waa inay la jaanqaadi kartaa Windows NT iyo Windows 2000